Doorashada lagu celinayo | Somaliska
Axada soo socota 15 bisha ayaa qeyb ka mid ah doorashadii ka dhacday Sweden 2010 ee ay ku so bexeen cunsuriyiinta lagu celinayaa labo gobolka oo ka tirsan Sweden. Gobolka Örebro ayaa lagu celinayaa doorashadii kamuunka, halka gobolka Västra Götaland lagu celin doono guud ahaan doorashadii gobolka. Hadaba waxaa muhiim ah in laga qeyb galo doorashadaas oo cidii xaq u leh in ay codeyso ay ka qeyb qaataan in loo codeeyo xisbiyada u dooda arimaha Soomaalida iyo horumarinta dalka iyo in laga hor istaago cunsuriyiinta Sverige Demokraterna in ay soo galaan maamulka kamuunada ama ay helaan xubin u fadhiisata gobolka. Soomaalida joogtay wadanka 3 sano ayaa xaq u leh in ay ka qeyb qaataan doorashada mida kamuunka iyo mida gobolka. Wixii faahfaahin ah waxaad ka heli kartaan http://www.val.se/ Doorashada ayaa lagu celinayaa ka dib markii Gudiga baaritaanka doorooshinka (Valprövningsnämnden) ay sheegeen in qaladaad waaweyn ay dheceen xiligii doorashada taasoo wax ka badali kartay natiijada doorashada.
Axada soo socota 15 bisha ayaa qeyb ka mid ah doorashadii ka dhacday Sweden 2010 ee ay ku so bexeen cunsuriyiinta lagu celinayaa labo gobolka oo ka tirsan Sweden. Gobolka Örebro ayaa lagu celinayaa doorashadii kamuunka, halka gobolka Västra Götaland lagu celin doono guud ahaan doorashadii gobolka.
Hadaba waxaa muhiim ah in laga qeyb galo doorashadaas oo cidii xaq u leh in ay codeyso ay ka qeyb qaataan in loo codeeyo xisbiyada u dooda arimaha Soomaalida iyo horumarinta dalka iyo in laga hor istaago cunsuriyiinta Sverige Demokraterna in ay soo galaan maamulka kamuunada ama ay helaan xubin u fadhiisata gobolka.
Soomaalida joogtay wadanka 3 sano ayaa xaq u leh in ay ka qeyb qaataan doorashada mida kamuunka iyo mida gobolka. Wixii faahfaahin ah waxaad ka heli kartaan http://www.val.se/
Doorashada ayaa lagu celinayaa ka dib markii Gudiga baaritaanka doorooshinka (Valprövningsnämnden) ay sheegeen in qaladaad waaweyn ay dheceen xiligii doorashada taasoo wax ka badali kartay natiijada doorashada.
May 13, 2011 at 21:51
Asc salan kadib jimcalow dorashada 2 da gobal hadi loga adkado xisbiga cunsuriga maxa is badal oo no iman kara? Ma labada gobal ama wadanka o dhan weye waxa lagu celinayo jawab wcn